EBE A NA-ECHEKWA SCREENSHOTS NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ọ dịkarịa ala abụọ ederede keyboard keyboard na PC - Cyrillic na Latin. Dịka iwu, a na-eme mgbanwe ma ọ bụrụ na enweghị nsogbu site na iji ụzọ mkpirisi keyboard ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi kwekọrọ na "Toolbars". Ma, mgbe ụfọdụ site na ịrụ ọrụ nke manipulation e nyere na enwere ike inwe nsogbu. Ka anyị hụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na asụsụ na keyboard adịghị agbanwe na kọmputa na Windows 7.
Hụkwa: Otu esi eweghachite ogwe asụsụ na Windows XP
Keyboard gbanwee mgbake
A ga - ekewa nsogbu niile na ịgbanwere nsụgharị ederede keyboard na PC dị iche iche dị iche iche: ngwaike na ngwanrọ. Ihe kachasị mkpa na ìgwè mbụ bụ ihe kpatara ya bụ ọdịda igodo banal. Mgbe ahụ ọ dị mkpa ka a rụzie ya, ma ọ bụrụ na enweghi ike idozi, weghachite keyboard n'ozuzu ya.
Na ụzọ nke iwepu ọdịda kpatara usoro ihe omume, anyị ga-atụle n'isiokwu a n'ụzọ zuru ezu karị. Ụzọ kachasị mfe iji dozie nsogbu nke na-enyere aka n'ọtụtụ ọnọdụ bụ ịmalitegharịa kọmputa ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, dịka iwu, mgbanwe nhazi nke keyboard ga-amalite ịrụ ọrụ ọzọ. Ma ọ bụrụ na a na-emeghachi nsogbu ahụ mgbe niile, mgbe ahụ ịmaliteghachi PC n'oge ọ bụla bụ ihe na-adịghị mma, n'ihi ya, a gaghị anabata nhọrọ a. Ọzọ, anyị na-atụle ụzọ ndị a na-ejikarị eme ihe iji dozie nsogbu nke ịgbanwe agbanwe nchịkọta keyboard, nke ga-adị mfe karịa usoro a kapịrị ọnụ.
Usoro 1: Ntuziaka Njikwa Akaụntụ
Ihe kachasị ihe mere keyboard anaghị agbanwe bụ eziokwu na usoro faịlụ ctfmon.exe anaghị agba ọsọ. Na nke a, ọ ga-arụ ọrụ aka.
Meghee "Windows Explorer" ma pịnye ụzọ na-esote ya n'ime ụlọ nkwụsị ya:
Mgbe pịa nke a Tinye ma ọ bụ pịa akara akara aka nri nke adres adreesị.
Na ndekọ mepere emepe, chọta faịlụ a na-akpọ CTFMON.EXE ma pịa bọtịnụ akaekpe aka ya abụọ.
A ga-arụ ọrụ faịlụ ahụ, ya mere ikike nke ịgbanwee nhazi asụsụ keyboard ga-amaliteghachi.
E nwekwara usoro ihe ngwa ngwa, ma nke chọrọ ibu isi iwu ahụ.
Pịnye na keyboard Nweta + R ma tinye okwu ahụ na windo meghere:
Pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe nke a gasịrị, a ga-eweghachite ikike nke ịgbanwee ọnọdụ.
Ya mere, otu n'ime nhọrọ abụọ a iji aka na-amalite faịlụ CTFMON.EXE adịghị achọ ịmalitegharịa kọmputa ahụ, nke dị mfe karịa ịmalitegharịa usoro oge ọ bụla.
Usoro 2: Editor Editor
Ọ bụrụ na mmeghe akwụkwọ ntuziaka nke faịlụ CTFMON.EXE enyeghị aka na keyboard ka agbanwebeghị, ọ bụ ihe ezi uche iji gbalịa idozi nsogbu ahụ site n'ịzie ndekọ ahụ. Ọzọkwa, usoro na-esonụ ga-edozi nsogbu ahụ n'ụzọ dị ịrịba ama, ya bụ, na-enweghị mkpa iji rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ faịlụ ahụ.
Ntị! Tupu ịme usoro ọ bụla iji dezie ndekọ ahụ, anyị na-akwado gị ka ị mepụta ya iji chekwaa ya mgbe ị na-eme ihe ọjọọ.
Kpọọ window Gbaa ọsọ site na ịpị ọnụ Nweta + R ma banye n'ime ya okwu ahụ:
Na windo mmalite Editor Editor A chọrọ mgbanwe ụfọdụ. Pịgharịa gaa n'aka ekpe nke windo ahụ, na-agagharị na ngalaba. "HKEY_CURRENT_USER" ma "Software".
Ọzọ, mepee alaka ahụ "Microsoft".
Ugbu a gaa na ngalaba "Windows", "CurrentVersion" ma "Gbaa ọsọ".
Mgbe ịkwaga na ngalaba "Gbaa ọsọ" pịa nri (PKM) site n'aha ya na n'ime menu nke mepere emepe, họrọ "Mepụta", na na ndepụta ndị ọzọ pịa ihe "Ntọala ntụgharị".
N'aka aka nri "Editor" E gosipụtara mpaghara oke eriri e kere. A chọrọ ka ọ gbanwee aha ya "ctfmon.exe" enweghị nzacha. Enwere ike ịbanye aha ozugbo ozugbo e mepụtara ihe ahụ.
Ọ bụrụ na ị pịrị ebe ọzọ na ihuenyo ahụ, mgbe ahụ, na nke a, a na-echekwa aha eriri eriri ahụ. Mgbe ahụ, iji gbanwee aha aha na aha achọrọ, pịa na nke a. PKM na ndepụta nke mepee, họrọ Kpọgharia aha.
Mgbe nke a gasịrị, ubi maka ịgbanwe aha ahụ ga-arụ ọrụ ọzọ, ị nwere ike tinye ya:
Pịa ọzọ Tinye ma ọ bụ dị nnọọ pịa akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ.
Ugbu a, pịa ọnụọgụ abụọ na nchịkọta eriri.
N'ogige ọrụ nke window ahụ meghere, tinye okwu ahụ:
Mgbe ihe a gasịrị "ctfmon.exe" ya na uru e kenyere ya ga-egosipụta na ndepụta mpaghara kachasị elu "Gbaa ọsọ". Nke a pụtara na faịlụ CTFMON.EXE ga-agbakwunye na mmalite Windows. Iji mezue usoro mgbanwe ahụ, ị ​​ga-achọ ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Mana usoro a ga-eme naanị otu ugboro, ọ bụghị kwa oge, dị ka ọ dị na mbụ. Ugbu a, faịlụ CTFMON.EXE ga-amalite na akpaghị aka na mmalite nke sistemụ arụmọrụ, na, ya mere, nsogbu na enweghị ike ịgbanwe agbanwe ntụgharị asụsụ keyboard ekwesịghị ibili.
Ihe omumu: Otu esi tinye usoro ihe omume iji malite Windows 7
Iji dozie nsogbu nke enweghị ike ịgbanwe nsụgharị asụsụ na kọmpụta na Windows 7, ị nwere ike iji ọtụtụ ụzọ: ịmalitegharịa PC, jiri aka na-agbalite faịlụ ahụ na-edezi ma dezie ndekọ ahụ. Nhọrọ nke mbu bụ ihe na-adịghị mma maka ndị ọrụ. Ụzọ nke abụọ dị mfe, mana n'otu oge ahụ anaghị achọ oge ọbụla ịchọta nsogbu ịmalitegharịa PC. Nke atọ na-enye gị ohere idozi nsogbu ahụ n'ụzọ dị egwu ma gbanyụọ nsogbu ahụ ma gbanwee otu ugboro. N'eziokwu, ọ bụ ihe siri ike nke nhọrọ ndị a kọwara, ma site n'enyemaka nke ntụziaka anyị, ọ dị nnọọ ike iji nwekwaa onye ọrụ nyocha.